चितामा राखेका युवकले आँखा खोलेपछि…. – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/चितामा राखेका युवकले आँखा खोलेपछि….
काठमाडौ । सन्सारमा अनौठा घटनाहरु भै रहन्छन् । भारतमा यस्तै एक अनौठो घटना भएको छ । बिहारको राजधानी पटनामा त्यस दिन एउटा अनौंठो घटना घटेको थियो जुन दिन अधिकांश महिलाले आफ्ना बच्चाहरूको दीर्घ आयुका लागि जितिया पर्वको उपवास गरीरहेका थिए त्यसै समय एक १७ बर्षे युवकको अन्तिम संस्कारको तयारी भए रहेको थियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उही समयमा, पीएमसीएचमा आपतकालिन प्रभारी डा। अभिजीतले भने कि उनले सौरभको घटना थाहा पाएर अचम्म परे । उनले भने कि जब उनलाई यस अस्पतालमा ल्याइएको थियो, उनी सास फेर्दै थिए । पीएमसीएचका आपतकालीन इन्चार्जले भने कि उनको अवस्था गम्भीर छ तर डाक्टरहरूको टोलीले उनलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **